कोरोनाले गरिब बनायो, गरिबीले उपचार रोक्यो निगरानी -
४ भदौ, काठमाडाै‌ं । कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको उपचारको साहारा बनेको यहाँका सरकारी अस्पतालका सेवा प्रभावित भएपछि बिरामी मर्कामा परेका छन् । सङ्घीय अस्पताल भरतपुर अस्पताल र बिपी कोराइला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सेवा पाँच दिनदेखि प्रभावित छ ।
दुवै अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र बिरामीमा कोरोना सङ्क्रमण भएपछि उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका अन्य चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेसनमा हुँदा सेवा प्रभावित भएको हो । ती दुवै अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा दिइएको छैन । भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारी, स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागका प्रमुख डा. सुनिलमणि पोख्रेलसहित पाँच जना चिकित्सक, दुई जना नर्स र एक जना सहयोगी कर्मचारी सङ्क्रमित भएका छन् ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलकाअनुसार अहिले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द छन् । उहाँका अनुसार ६०० श्यया भएको अस्पतालमा ९० प्रतिशत हाराहारी बिरामीले भरिने गर्दछन् । वहिरङ्ग सेवामा पनि दैनिक २ हजारसम्म बिरामी आउने गर्थे । उपचारका लागि चितवनसहित १९ जिल्लाका बिरामी आउने गरेको तथ्याङक छ । सरकारी अस्पतालमा धेरैको उपचार निःशुल्क हुन्छ भने पैसा लाग्दा पनि न्यून लाग्ने गर्दछ । पौडेलका अनुसार चेपाङ, मुसहर, अल्पसङ्ख्यक लगाएतका १२ वटा जातीले निःशुल्क उपचार पाउँछन् ।
सबै महिलालाई टिकट निःशुल्क छ । अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाईमार्फत बृद्धबृद्धासँगै आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकाले पनि उपचारमा छुट पाउँदै आएका थिए । अस्पताल बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी गर्भवती एवम् सुत्केरी गराउनुपर्ने प्रभावित भएका छन् । काठमाडौँको परोपकार प्रसुती गृहपछि धेरै सुत्केरी हुने अस्पताल भरतपुर अस्पताल हो । वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा। रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार सोही विभागका प्रमुख सङ्क्रमित भए पछि उहाँको सम्पर्कमा आएकै कारण आफू बाहेक सबै चिकित्सक र नर्सहरु आइसोलेशनमा रहेका छन् ।
पहिले नै भर्ना भएर सुत्केरी गराइएका ६ जना बिरामी मात्र विभागमा बाँकी छन् । सो विभागमा विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत गरी २२ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । सापकोटा यो मौषम सुत्केरी बढी हुने बताउनुहुन्छ । अस्पतालको सेवा सुचारु गर्दा दैनिक ५० जना हाराहारी गर्भवती आउने र ४० हाराहारी सुत्केरी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । जसमध्ये २५ प्रतिशत हाराहारीको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।
बच्चामा समस्या भएमा यही बाल सघन उपचार कक्ष पनि छ । सरकारी अस्पतालमा प्रसुती सेवा निःशुल्क हुन्छ । बााहिर निजीमा साधारण सुत्केरी हुँदा रु २० हजार हाराहारी र शल्यक्रिया गर्नुपर्दा रु ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । बाल सघन उपचार कक्षमा एक दिनको सरकारीमा रु १ हजार लाग्दछ भने निजीमा दैनिक रु १० हजार हाराहारी खर्च हुन्छ । गरिबको उपचारको सहारा भरतपुर अस्पतालका ती सेवा तीन दिनदेखि बन्द भएपछि बिरामी प्रभावित भएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको बिचल्ली भएको छ । अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा। डा. कृष्ण पौडेल कोरोना सङ्क्रमित तह १ का बिरामीका लागि बाहीर ५०० श्ययाको अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनुहुन्छ ।
तह दुई भरतपुर अस्पताललाई बनाएर तह तीन यहाँका मेडिकल कलेज बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जसले गर्दा भरतपुर अस्पतालले अन्य बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने पौडेलको तर्क छ । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा। भोजराज अधिकारी निषेधाज्ञा पछि बहिरङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुहुन्छ । प्रसुती सेवा छिट्टै खुल्ने गरी तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
आइसोलेशनमा रहेकाको नमूना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ । यहाँ भदौ ५ गते सम्म निषेधाज्ञा जारी भएको छ । अधिकारीले भन्नुभयो, “हामी सकेसम्म चाँडो सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।” निजी क्षेत्र कारोना बिरामीको उपचारमा पन्छिन नहुने भन्दै उहाँले गरिबले उपचार पाउने भरतपुर अस्पताल पुरै कोरोना उपचारमा प्रयोग गर्न नसकीने बताउनुभयो । उता बीपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतम अस्पतालका सात जना स्टाफ नर्स र तीन जना सरसफाइका कर्मचारी सङ्क्रमित भएपछि प्रभावित भएको सेवा सकेसम्म छिटो सुरु गर्ने बताउनुहुन्छ ।
आइसोलेशनमा बसेकाको स्वाब परीक्षणपछि अस्पताल चलाउने उहाँको भनाइ छ । क्यान्सर अस्पतालमा देशभर र भारतीय भूमीबाट बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । अस्पतालमा दैनिक ४०० बिरामी आउने गरेको गौतमले बताउनुभयो । देशभरबाट दैनिक बिरामी लिएर ५० भन्दा बढि एम्बुलेन्स सो अस्पताल आउने गर्छन् । सरकारी अस्पताल भएकाले न्यून शुल्कमा त्यहाँ उपचार हुने भएपनि निजीमा महङ्गो शुल्क तिर्न बिरामी अहिले बाध्य भएका छन् । रत्ननगर बकुलहर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. विश्ववन्धु वगाले सङ्क्रमित भए पछि सो अस्पताल पनि प्रभावित छ ।
कोरोनाको प्रभाव सरकारीमा देखिएपछि निजीको भर पर्नुपर्दा बिरामी प्रभावित भएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई सरकारीमा सेवा केही दिनका लागि मात्र प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ । कोरोनाको उपचार निजीमा पनि कम्तीमा २० प्रतिशत श्ययामा गर्न पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारी अस्पतालमा पुरै कोभिड राख्दा अन्य बिरामी प्रभावित हुने भएकाले मेडिकल कलेज र निजीमा पनि कोभिडको उपचार हुने उहाँको भनाइ छ । ​रासस
कोरोना भाइरस गरिबी